२०७९ बैशाख ३० शुक्रबार १८:०६:००
उदयपुरको कटारी नगरपालिका १० मा रहेको कालिका माध्यमिक विद्यालयको मतदान केन्द्रमा गोली चलेको छ । शुक्रबार दिउँसो साँढे चार बजेतिर गोली चलेको उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘मतदानको अन्तिम समयमा गोली चलेको जानकारी आएको छ । कसले चलायो ? किन चलायो ? केमा विवाद भयो ? हामी बुझिरहेका छौँ । गोली लागेर क्षति भएको/ नभएको जानकारी लिइरहेका छौँ ।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरका एसपी सुवासचन्द्र बोहोराले गोली चलेको हल्ला आएको र आफूले आधिकारीक रूपमा बुझ्न नपाएको बताए । उनले भने, ‘गोली चलेको हल्ला आएको छ । खासमा के भएको हो ? हामी फोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ, अधिकारिक रूपमा बुझ्न पाएका छैनौँ ।’
जोगबनी नाकामा एसएसबीका जवानले अन्धाधुन्ध गोली चलाएपछि आतंक